DIB U EEGID: Ronaldo Waa Trump, Messi-na waa Clinton – Leo ayaa CR7 ku garaacay codadkii FIFA World 11 | Laacibiin & Baahin – News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs	Tuesday, January 17th, 2017	Home
DIB U EEGID: Ronaldo Waa Trump, Messi-na waa Clinton – Leo ayaa CR7 ku garaacay codadkii FIFA World 11
Jan 10, 2017 - Aragtiyood	Wariyaha qabiirka ah ee Kent Brockman ayaa yiri “Waxaan horey udhahay waan dhahayaa mar kale: Democraadiga si fudud uma aysan shaqeyn, hadii aad ku raaci laheyd iyo hadii kalaba waase arin aan la diidi karin in wax walba ay adkaayeen ayna Dimuquraadiga heleen wax aysan fileyn.
Sidee ayay tahay in loo sharaxo in dadka Ameerika intooda badan ay ucodeeyeen Hilary Trump doorashadii bishii November, tas oo Donald Trump loogu dhaarin doono inuu noqdo taliyaha ciidamada Mareykanka.
Waxa ay tahay inaad ogaato ayaase ah in L. Messi uu helay codadka ugu badan ee 11-ka ugu wanaagsan aduunka, laakiin uu kaalinta labaad kaga dhameystay xidiga aduunka ee FIFA Best FIFA Men’s Player of the Year award?
Shaxda ugu wanaagsan aduunka ee FIFPro World11 waxaa go’aansada ciyaaryahanada kaliya, abaalmarinta ugu wanaagsanse waxaa ucodeeya taageerayaasha kuwaas oo si Online ah loogu soo geliyo, kabtanada iyo tababaraha qaramada iyo saxafiyiinta ayaa sidoo kale codeynta ka qeyb qaata.
Xidiga Euro 2016 iyo Champions League ku guuleystay ee Ronaldo ayaa helay 35.54% isagoo sidaas ugu guuleystay Men’s Player of the Year, halka Messi oo soo galay kaalinta labaad uu helay 26.42%. Antoine Griezmann oo sedexaad galay ayaa isna helay 7.53%, waxaana uu ka horeeyay Neymar iyo Luis Suarez oo kala helay 6.23% iyo 5.11%,.
Arinta xiisaha leh ayaa ah in codeyntii FIFPro ay kasoo muuqdeen 26,516 ciyaaryahan oo aduunka ah laakiin natiijooyin kala duwan ayaa kasoo baxay.
Inkastoo Messi uusan helin xidiga aduunka ee FIFA hadana waxaa uu helay codadka ugu badan ee shaxda aduunka ciyaaryahanada weerarka loo doortay oo uu CR7 ku jiro
Si kastaba, kaama yaabineyso in FIFA ay go’aansatay in saxafiyiinta iyo taageerayaasha ay codeyntooda isku natiijo tahay.
Laakiin Taas maxey ka micno tahay? Messi miyuu ahaa weeraryahanka ugu wanaagsan aduunka sanadkii lasoo dhaafay, laakiin Ronaldo ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa?